Unoyeuka Here?—June 2017 | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuKenya Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Sangano raMwari parinopa mirayiridzo, hama dzakadai sevatariri vematunhu nevakuru muungano dzinofanira kuitei?
Dzinofanira kukurumidza kuita zvinenge zvataurwa. Dzinogona kuzvibvunza kuti: ‘Ndinokurudzira vandinonamata navo kuti vavimbike kuna Jehovha here? Ndinokurumidza kubvuma uye kutsigira mirayiridzo inopiwa nehama dziri kutungamirira here?’​—w16.11, peji 11.
VaKristu vechokwadi vakapinda muutapwa hweBhabhironi riini?
Izvi zvakaitika pashure pekunge vaapostora vafa. Panguva iyoyo, pakatanga kuva neboka revanhu vaizviita vakuru vakuru. Chechi nehurumende zvakaita kuti chiKristu chakatsauka chikurumbire uye zvakaedza kuita kuti vaKristu vakanga vakaita segorosi vasamboteererwa. Asi makore ekuma1914 ava kusvika, vakazodzwa vakatanga kubuda muutapwa.​—w16.11, mapeji 23-25.
Nei basa rakaitwa naLefèvre d’Étaples raikosha?
Mumakore ekuma1520, Lefèvre akashandurira Bhaibheri mumutauro wechiFrench kuitira kuti vanhu vakawanda variwane. Matsananguriro aakaita ndima dzeBhaibheri akabatsira Martin Luther, William Tyndale naJohn Calvin.​—wp16.6, mapeji 10-12.
“Kufunga kwenyama” kwakasiyana papi ‘nekufunga kwemweya’? (VaR. 8:6)
Munhu ane kufunga kwenyama anotongwa nezvido zvake uye anonyanya kuisa pfungwa dzake pazvido izvozvo zvekuti anogara achitaura nezvazvo uye kuzvirumbidza. Munhu ane kufunga kwemweya anokoshesa mafungiro aMwari uye anoita zvinodiwa naMwari; muKristu akadaro anotungamirirwa nemweya mutsvene. Kufunga kwenyama kunoita kuti munhu anange kurufu uye kufunga kwemweya kunomuita kuti ave neupenyu nerugare.​—w16.12, mapeji 15-17.
Zvii zvatingaita kuti tisanyanya kuzvidya mwoyo?
Ronga zvinhu zvako uchitanga nezvinokosha, usaedza kuita zvausingakwanisi, zuva rega rega iva nenguva yekumbova wega usina chinokuvhiringidza, gara uchimbotaurawo zvinosetsa, gara uchiita maekisesaizi uye wana nguva yakakwana yekurara.​—w16.12, mapeji 22-23.
“Inoki akatamiswa kuti asaona rufu.” (VaH. 11:5) Sei?
Zvinoita sekuti Mwari akaita kuti Inoki afe rufu rwusingarwadzi asingazivi kuti ari kufa.​—wp17.1, mapeji 12-13.
Kana munhu aine mwero haazvioneri pamusoro uye anoziva kuti ane zvaasingakwanisi kana kuti zvaasingabvumirwi kuita. Tinofanira kuremekedza vamwe nekuvabata zvakanaka uye hatifaniri kuzviona setinokosha kupfuura vamwe.​—w17.01, peji 18.
Uchapupu hupi huripo hwekuti Mwari aitungamirira dare rinotungamirira munguva yevaapostora sekutungamirira kwaari kuita vaya vari muDare Rinotungamirira mazuva ano?
Vachibatsirwa nemweya mutsvene, vakanzwisisa chokwadi cheMagwaro. Vachibatsirwa nengirozi, vakatungamirira basa rekuparidza, uye vaitungamirirwa neShoko raMwari pakuita zvisarudzo. Izvi ndizvo zviri kuitikawo mazuva ano.​—w17.02, mapeji 26-28.
Ndezvipi zvinhu zvina zvinoita kuti tikoshese rudzikinuro?
Zvinhu zvacho ndeizvi: Munhu akatipa, chakaita kuti atipe, kuzvipira kwaakaita uye kuti rune zvarunotibatsira here. Tinofanira kufungisisa kuti zvinhu izvozvo zvina zvinoratidza sei kukosha kunoita rudzikinuro.​—wp17.2, mapeji 4-5.
MuKristu anokwanisa here kuchinja chisarudzo chaanenge amboita?
Tinofanira kuita zvatinenge takataura. Asi dzimwe nguva chimwe chisarudzo chinenge chichida kuongororwazve. Pashure pekunge vaNinivhi vapfidza, Mwari akachinja zvaakanga asarudza. Dzimwe nguva kuchinja kwezvinhu kana kuti kuziva mamwe mashoko kunogona kuita kuti tichinjewo zvisarudzo zvedu.​—w17.03, mapeji 16-17.
Nei kuparadzira mashoko anokuvadza kuine ngozi?
Kunogona kuita kuti dambudziko riwedzere kukura. Kunyange takarurama kana kuti kwete, kutaura mashoko anokuvadza hakuzombofi kwakagadzirisa zvinhu.​—w17.04, peji 21.
Unoyeuka Here?—June 2017